Muqidisho waa halkii aan ku barbaaray ee aan wali jeclahay Laakiin! Muqdisho waa meeshii khaddii u horeesay aan ku riiqday Laakiin! Muqdisho waa goobta kaliya ee aad ka heli karto Isbarmuuto inta hortaada lagu shiido misana lagaa siiyo $0.02 wax u dhigma Laakiin! Muqdisho waa magaalo baddii ay ku taal adoo wabigiina kuu jiro wax ka yar 30.KM Laakiin! Muqdisho waa Caasimaddii Soomaaliya laga soo bilaabo tan iyo kolkii xorriyada la qaatay ilaa burburkii Soomaaliya 91.kii, Laakiin! Muqdisho waa halkii ay ku taalay Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed ee ah xaruntii ay ka soo qalin jabiyeen inta badan Aqoonyahanka ay maanta Soomaali la soo shir tagto, HADDIIBA LALA SOO SHIR TAGI LAHAA. Laakiin. Muqdisho waa goobaha aan ugu jeclahay Soomaaliya inaan ku noolaado waana dareen ay dad badan oo Soomaali ahi qabaan.Laakiin. Muqdisho haddii ay saas tahay maxaan laakiin-ta u gashay? Ma u qalantaa Caasimad Soomaaliyeed maxaan isu weydiiyey? Horta Muqdisho ma is badashay? Muqdisho Siyaasad ah! aan maka liidataa Soomaaliya inteeda kale? Muqdisho ma tahay Muqdishadii 91.kii aad ku ogayd?. [qoraalka oo dhan
Gabagabadii anoon ku daalin aan ra’yigeyga kuu sheego, Muqdisho Caasimad Soomaaliyeed uma qalanto, inta ay saan tahay Siyaasad ahaan, inta ay 7.hogaamiye leedahay, inta aan heshiis laga gaarayn gacanta ku haynta Muqdisho, xitaa haddii ay dhacdo in heshiis lagu gaaro Eldoret oo dowlad Soomaaliyeed lagu soo dhiso, haddii aan degmo kale laga dhigin Caasimadda Soomaaliya, haddey rabto ha’ahaato Caasimad ku meel gaadh ahee, waxaan shaki iiga jirin in ay mari doonto tubtii ay martay dowladii Carta lagu soo dhisay, C/Qaasim iyo dowladiisiina sababihii ay la kici weyday waxaa kaw iyo labo laga dhigi karaa, diidistii uu diiday C/Qaasim Baydhabo iney noqoto Caasimadda K.M.G. ah, iyo goortii uu Xamar ka soo dagay ee uusan isu qaabeeynin sidii Madaxweyne Soomaaliyeed, ee uuba dhex seexday guri ay qaraabadiisu leedahay, halkii uu hadduu wax kale waayo uu dagi lahaa goobaha loo yaqaanno hantida dadweynaha ama hantida dawlada, ugu yaraan iskuul ama Masaajidkii Isbahaysiga haduu iska dhex dagi lahaa caymo ayey u ahaan lahayd mirihii Jabuuti.